Nepali Rajneeti | प्रधानमन्त्री केपी ओलिलाई कृष्ण प्रसाद सिटौलाले कान्ला भित्रको भ्यागुतो भनेपछी यस्तो सम्म भयो
प्रधानमन्त्री केपी ओलिलाई कृष्ण प्रसाद सिटौलाले कान्ला भित्रको भ्यागुतो भनेपछी यस्तो सम्म भयो
मंग्सिर २३, २०७७ मंगलबार ९८३ पटक हेरिएको
२३ मंसिर काठमाडौं:
नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको निम्तो मानेर फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी बैठक बोलाउनु सकारात्मक भए पनि बैठकमा ओलीको प्रस्तुती देखेर सिटौला निराश देखिएका छन् । देशको वास्तविक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओली ‘अपडेट’ नभएको र गुमराहमा परिरहेको सिटौलाको निश्कर्ष छ ।
कुवाको भ्यागुतोले कुवालाई नै संसार ठानेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बालुवाटारलाई नै देश ठानेको सिटौलाले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुतिबारे टिप्पणी गर्दै सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँको आजको प्रस्तुति हेर्दा उहाँले कुवाको भ्यागुतोजस्तो बालुवाटारलाई नै देश ठान्नुभएको छ ।’
प्रस्तुत छ, सिटौलासँग गरिएको छोटो कुराकानी:
आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो, के रहेछ प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा ?
प्रधानमन्त्रीजीको खासै एजेण्डा र प्रस्ताव थिएन । उहाँले शुरुमा विषय प्रवेश गरेर कोरोना संक्रमण महामारीको कुरा उठाउनुभयो ।
हामीले परीक्षण, उपचार सबै कुरामा प्रयास गरिरहेका छौं, भ्याक्सिन पनि जनतालाई छिट्टै उपलब्ध गराउँछौं भन्नुभयो । सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचना मात्रै भएको छ, यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले शीर ठाडो पार्ने मौका पाइरहेका छन् भन्नुभयो ।
आफ्नै दलभित्रको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो । हिजो विप्लव माओवादीले शिक्षकको घाँटी रेटेर मारेको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो । उहाँले विषय प्रवेश गर्दा गरेको जुन चर्चा हो, त्यसमा खासै एजेण्डा थिएन ।
उसोभए, सर्वदलीय बोलाउनको उद्देश्य के रहेछ ?
लामो समय भएको थियो सर्वदलीय बैठक नभएको, त्यसैले म अब सबै दलहरुको विचारलाई कदर गरेर अगाडि जान्छु भन्ने सन्देश दिनलाई हो सायद । कहिलेकाँही प्रतिपक्षी दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सर्वदलीय बैठक गर्नु र उनीहरुको कुरा सुन्नुलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ ।
सर्वदलीय बैठकको खास निष्कर्षचाहिँ के निस्कियो त ?
उहाँले विषय प्रवेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हामीले प्रष्टरुपमा भनेका छौं, सरकारको तीन वर्षको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा सरकार असफल देखिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था छ, यसमाथि अहिले प्रतिक्रियावादीको शीर उठ्न थाल्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यसको मूल कारण पनि सरकार नै हो । उहाँ नै हो ।
तपाईले (प्रधानमन्त्रीले) संवैधानिक निकायहरुलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुभएन । प्रहरी प्रशासनलाई पनि स्वतन्त्र काम गर्न दिनुभएन् । धेरै ठाउँमा दमन गर्नुभयो, तनहुँको एउटा हो, अरु पनि थुप्रै घटना छन् ।
कोभिड-१९ को महामारीबाट जनतालाई जोगाउन ठोस व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । गरिव जनता उपचार गर्न नसकेर घरमै मर्न बाध्य छन् । निजी क्षेत्रमा गएर उपचार गर्न सक्ने ल्याकत छैन गरिव मान्छेको ।
तमाम कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेका कारण जनताको मनोवल गिरेको छ । जनता निराश छन् तपाईको सरकारप्रति प्रधानमन्त्रीजी, यो तपाईले आत्ममूल्याङकन गर्नुस् भन्यौं ।
कमसेकम आज धेरै समयपछि बोलाएर यति कुरा भन्ने मौका दिनुभयो ।
कांङ्ग्रेसले जस्तै अरु दलले पनि सरकारको आलोचना गरे ?
आज त्यहाँ जनमोर्चाले पनि खासगरी सरकारको आलोचना नै गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि आलोचना नै गरेको छ । नारायणमान बिजुक्छेले पनि आलोचना गरे । आज त्यहाँ सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर एकजनाले पनि बोल्नुभएन ।
सत्तापक्षका अन्य नेताहरुले नि ? सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरु सबै हुनुहुन्थ्यो । आज उहाँहरु कसैले पनि बोल्नुभएन । अनलाईन खबरबाट ।